> Resource> égwu> Nyefee ngwa site Android ka Moto X na 1 Pịa
Zụtara a Motorola Moto X? Ọ bụ n'ezie ihe na-akpali akpali ihe na-nwere ndị dị otú a onwunwu Android smartphone, ọ bụghị ya? Otú ọ dị, mgbe na-abịa ngwa nyefe, i nwere ike inwe rapaara ma na-eche dara mbà n'obi. Ị pụrụ ichetụ n'echiche na ị ga-sọfụ internet ibudata jụụ ngwa ọdịnala na i nwere on gị ochie Android smartphone Moto X? Ọ ga-ewe gị oge dị ukwuu.
Ọ bụrụ na ị crazy banyere ya, i nwere ike m nkwanye ebe a. Nke ahụ bụ na-agbalị Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Dị ka a omume ọma e ekwentị transfer software, ọ na-ahapụ gị nyefee faịlụ n'etiti igwe na mbadamba na-agba ọsọ Android, iOS na Symbian. Na ya aka, ị nwere ike nyefee niile ngwa na ị arụnyere na ochie Android ekwentị gaa na Moto X na otu Pịa. E wezụga ngwa, ya ọbụna na-enye gị ka ị na idetuo ederede ozi, kọntaktị, music, photos, oku na ndekọ na vidiyo si ochie Android ekwentị Moto X.
Download a software nyefee Android ngwa Moto X.
Cheta na: The Wondershare MobileTrans akwado nza nke Android igwe na mbadamba. Pịa ebe a iji nweta ihe Ama banyere ya. Imata na usoro ngwa ọdịnala na preinstalled ngwa ọdịnala na-agaghị ekwe nyefee n'etiti Android igwe. Ugbu a, Lets si na-Windows version dị ka ihe atụ.
A zuru ndu nyefee ngwa site Android ka Moto X
Ndị na-esonụ zuru nduzi na-egosi gị otú ị na-eji Wondershare MobileTrans nyefee ngwa site na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-Moto X. Ugbu a, na-ahapụ 'lelee nduzi ọnụ.
Nzọụkwụ 1. agba ọsọ a software na kọmputa
Ihe mbụ ị ga-eme bụ na-agba ọsọ a MobileTrans software na kọmputa mgbe echichi. Nke a ga-eme ka ya isi window. Mgbe ahụ, pịa Malite.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee faịlụ ka / site na Apple ngwaọrụ, ị kwesịrị iji wụnye iTunes na kọmputa ka a software arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ na Android ekwentị na Moto X na kọmputa
Jikọọ gị ochie Android ekwentị na Motorola Moto X na kọmputa site ịkwụnye USB cables. The MobileTrans software ga-akpaghị aka ịchọpụta ha. Mgbe ahụ, dị ka ọ na-gosiri na isi window, gị ochie Android ekwentị na gosiri na n'aka ekpe, na Moto X-egosi na nri.
Ebe ọ bụ na faịlụ niile gosiri na isi window na-enyocha na ike ga-agafere, i kwesịrị iji wepụ akara tupu ndị ọzọ faịlụ ma e wezụga ngwa. Dị ka Doro Anya data tupu oyiri, ọ na-eji wepụ ngwa i arụnyere na Moto X. N'ihi ya, dị ka ị na-ahọrọ na-ego ma ọ bụ uncheck ya.
Nzọụkwụ 3. Nyefee ngwa site Android ka Motorola Moto X
Ugbu a, na-amalite nyefee ngwa ọdịnala site na ịpị Malite Copy. The ngwa transfer usoro dialog Pop elu. Na nke a dialog, ị nwere ike ịlele pasent nke nyefe. Mgbe ngwa transfer na-okokụre, biko pịa OK.
Gbalịa a software idetuo ngwa site Android ekwentị Moto X.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị zọpụta ọtụtụ ngwa ọdịnala na kọmputa, ị nwere ike iji Wondershare MobileGo for Android iji wụnye ha gị Motorola Moto X.
Gịnị mere égwu Crash on iOS 8 na Solutions